Sagantaa Dilbata Onkoloolessa 17, 2021 - Independent Oromia
Kurfii RSWO · Dilbata Onkoloolessa 17, 2021
Ajjeechaan qaama Faannoo jedhee of waamuun Uummata Oromoo irratti, Konyaa Matakkal keessatti raawwatamu itti-fufee jiraachuu.
Lola WBO fi Loltoota Mootummaa Koloneeffataa Impaayera Itoophiyaa gidduutti, Konyaa Gujii Lixaa, Magaalaa Bulee Horaa fi gandeen naannawa magaalichaatti argaman keessatti tibbana walitti-fufiinsaan adeemsifamaa turee fi wal-fudhannaa WBO fi Hawaasa Oromoo bakkasii.
Duulli duguuggaa sanyii qindaawaan, ijaarsa Naannoo Amaaraa Faannoo jedhamu, milishoota Naannoo Amaaraa fi harcaatota nafxanyaa kanneen Oromiyaa keessatti wal-horaniin, Konyaa Baha Wallaggaa, Ona Giddaa Kiiramuu, Amuruu fi Guutoo Giddaa keessatti, Onkoloolessa 10, 2021 Uummata Oromoo irratti baname itti-fufee jiraachuu.
Hata’u malee, gaaga’amni lubbuu, miidhaan qaamaa, buqqaatiin, akkasumas saamichii fi mancaafamni qabeenyaa Oromoo irratti humnoota kanneeniin raawwatamaa jiru waakkatamuu.
Inummaayyuu, akka waan tarkaanfiin kun Uummata Oromootiin dhalattoota Amaaraa Oromiyaa keessa jiraatan irratti fudhatamaa jiruutti fakkeeffamuun, ololli sabaa-himaalee mootummaa Impaayerattii fi finxaaleyyii habashootaa garaagaraan oofamu daran jabaatee jiraachuu.
Daabalataanis, Oromoonni duguuggaa sanyii fi gochaalee hammeenyaa humnoota Naannoo Amaaraatiin isaan irratti raawwatamaa jiran sabaa-himaalee garaagaraaf odeessa keennan adamsamuun hidhamaa jiraachuu.
Sagantaa (Kurfii) RSWO Dilbata Onkoloolessa 17, 2021